Izinsizakalo Zokwakha - Print Peppermint
Izinsizakalo Zokuqamba Ngezithombe Zokuqasha
Izinsizakalo Zokuklama ezingabizi
Ilogo & Idizayini Yekhadi Lebhizinisi
Isiqinisekiso se-100% nobunikazi
Izinsizakalo Zethu Zokudweba Imidwebo Edume Kakhulu
Isevisi Yokwakhiwa Kwephakheji Yelogo Nemikhiqizo
Insizakalo Yokubhala Kwama-stationery
Ilogo Nesevisi Yokwakhiwa Kwekhadi Lebhizinisi
Awuqinisekile ukuthi iyiphi insizakalo yokuklama ekufanele?
Cela i-Design Quote
Print Peppermint amakhasimende angabanye babantu abagqugquzeleka ngokwengeziwe kanye namabhizinisi emikhakheni ehlukahlukene ebanzi nezindlela zokuziphatha.
Bheka amathiphu, okokufundisa, nezindatshana zokumaketha nokuklama ukuthola imibono yephrojekthi yakho elandelayo.
Uyithuthukisa Kanjani (Futhi Uyigcine) Ithoni Yezwi Lomkhiqizo Wakho
Ukusungula ithoni yomkhiqizo wezwi kubalulekile kunoma yiliphi isu lokumaketha lebhizinisi. Ukugcina izwi lomkhiqizo elingaguquki kusiza ukuxhumana okwengeziwe ngebhizinisi lakho nezithameli zakho. Ngaphezu kwalokho, kubenza bahlobane kalula nebhizinisi lakho, kulenze libe isithako esizuzisayo sokwakha ibhizinisi eliphumelelayo. Nansi inkomba yesinyathelo ngesinyathelo sendlela… Funda kabanzi
Amathuluzi aphezulu ayi-5 aku-inthanethi Okuguqula Izithombe zibe Amafayela Ombhalo
Amathuluzi e-OCR aku-inthanethi ayisengezo esimangalisayo kunoma iyiphi izikhali zababhali namuhla. Ngakho-ke, kufanele basebenzise kanjani futhi yiziphi ngo-2022? Ukuguqula izithombe zibe imibhalo ehlelekayo kuyisengezo esimangalisayo kunoma yiliphi ibhizinisi noma ukufihlwa kombhali. Lawa mathuluzi angenza ukuphila kube lula ngokuguqula izithombe zibe imibhalo ehlelekayo ukuze zisetshenziswe esikhathini esizayo nokunye. Ngokusho… Funda kabanzi
Amathiphu ayi-10 okwenza amavidiyo abukeka njengochwepheshe Kwabaqalayo
Isithombe: i-storyset nge-Freepik Ngokocwaningo, okuqukethwe kwevidiyo kwenza u-82% wethrafikhi ye-inthanethi kulo nyaka. Lokho kusho ukuthi abaningi bayakujabulela ukubuka amavidiyo lapho bephequlula i-inthanethi futhi bethola ulwazi olusha. Kodwa kungani bewathanda kangaka amavidiyo? Amavidiyo afinyeleleka kalula ngoba abasebenzisi bangabelana ngokuqukethwe kalula ezandleni zabo. … Funda kabanzi
Izesekeli Zekhadi Lebhizinisi